ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့်နှင့် စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၀ဖြင့် တရားစွဲဆိုထားခံရသော ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင် ၂ဦး၏ အမှုကို ယနေ့မြစ်ကြီးနား မြို့နယ်တရားရုံးတွင် ငွေဒဏ် ကျပ် ၁၀၀၀၀ စီဖြင့် အပြီးသတ် စီရင်ခဲ့သည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ရက်နေ့ လူထုဆန္ဒပြပွဲကြီးကို ဦးဆောင်ခဲ့သော Shd. Lama San Aung နှင့် Jan. Htu San နှစ်ဦးကို ယာယီ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး မြင့်မိုးမှ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရာတွင် တရားဝင် တင်ပြထားခြင်း မရှိသော ‘လော်စပီကာအသုံးပြုမှု၊ ပိုစတာများအသုံးပြုမှု’ ဟူသော အချက်များနှင့် ငြိမ်းစုစီ ပုဒ်မ ၂၀ ဖြင့် စွဲချက်တင်ခဲ့ကြောင်းကို Shd. Lama San Aung ကပြောဆိုသည်။
တိုက်ပွဲ နယ်မြေမျာ ပိတ်မိ စစ်ရှောင်ပြည်သူများ လွတ်မြောက်ရေး ဦးဆောင်ခဲ့သော ဆန္ဒပြ လူငယ်ခေါင်းဆောင် Hkangkum Lum Zawng၊ Hkawn Zau Jat နှင့် Nbau Nang Pu တို့ ၃ဦးကို မြို့နယ်တရားမှ ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်နေ့ ပြင်းထန်သည့် ပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည့်အပေါ် ပြည်သူလူထုများ ကျေနပ်မှုမရှိသည့် အတွက် တရားမျှမှု ရှိရေး ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ရက်နေ့တွင် ထပ်မံဆန္ဒပြဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။
ငြိမ်းစုစီ ပုဒ်မ ၁၉နှင့် စွပ်စွဲခံ Sut Seng Htoi အမှု တရားလို ၄ဦးကို...